Wadooyinka Magaalada Beledweyne oo maanta xiran (SAWIRRO) | Dhacdo
Wadooyinka Magaalada Beledweyne oo maanta xiran (SAWIRRO)
Wadooyinka Magaalada Beledweyne ayaa xiran, ka dib bannaanbixii maanta ka dhacay ee looga soo horjeeday safarka Madaxweynaha Hirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe).
Dadweyne careysan ayaa maanta isugu soo baxay wadooyinka Magaalada Beledweyne, iyagoona jaray wadada dheer laamiga ee marta Bartamaha Xarunta Gobolka Hiiraan.
Dadweynaha ayaa wadooyinka ku gooyay dhegxaan, geedo iyo birraha gaadiid la isticmaalay, si ay ugu muujiyaan, sida ay kaga soo horjeedaan safarka maanta lagu wado in Madaxweynaha Hirshabelle uu ku taggo magaaladaasi.
Bannaanbixii maanta ka dhacay magaalada ayaa dabo socdo iska horimaad hubeysan oo aroornimadii hore ee saakay ka dhacay kontorool ay Ciidamada Dowladda ku leeyihiin halka loo yaqaano Buundo 1aad.
Magaalada ayaa waxaa ka socdo dadaalo lagu doonayo in xaaladda lagu qaboojiyo, waxaana lagu wadaa in Odayaasha Dhaqanka ay la kulmaan wafdiga Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliya, Mukhtaar Xuseen Afrax oo Khamiistii gaaray Beledweyne.